Apple iPhone X Ubamba Value zayo Ingcono Noma yimuphi iPhone Langaphambilini - China Gracebestbuy International
Apple iPhone X Ubamba Value zayo Ingcono Noma yimuphi iPhone Langaphambilini
Uma ufuna ukuthenga i-iPhone ezingaba ubambe inani layo, ubhekisise Apple iPhone X.
Ekuhloleni kwakamuva, inkampani idilize B-Stock wahlola okuyinto iPhone owenza umsebenzi engcono ukuzibamba ukubaluleka kwayo. IPhone X waphuma phezu by esaziwa 85% wenani yayo yasekuqaleni emakethe yesibili. Izinkampani ukuthi ukuthenga i-iPhone X ngobuningi ukuba lithengise kwihendisethi olutholayo wona-75% wentengo okudayisa, B-Stock wathola, ngokuvumelana 9to5Mac, okuyinto wathola khona ikhophi yale esifundweni.
Apple ezikhishwe iPhone yayo X ngonyaka odlule ephezulu price tag kwenzeka Lananyathiselwa smartphone inkampani. Kumila iPhone X imodeli izindleko $ 999 futhi inguqulo nge isitoreji esiningi uya $ 1.149. Idatha B-Stock kusikisela iPhone X kuwufanele okungenani $ 849,15 izimpahla eziqinile ezingamasekeni.
Smartphone musa ngokuvamile ukubamba kahle ukubaluleka kwabo. Izici ezintsha, izingxenye ethuthukisiwe, izimbangi ziyakhanga bavame ukushayela value abo phansi kakhulu. Inani iPhone Apple abalahlekelwe efanayo, kodwa iyakwazi yima ungcono kakhulu. Ngokusho 9to5Mac, idatha B-Stock isikisela iPhone X osethe irekhodi elisha ubambe ukudayiswa kwayo ngemali eyifanele ingcono kakhulu kunanoma iyiphi nezinye iPhone emakethe.
Okutholakele izindaba kungenzeka kuhle izinkampani ukuthi zithole iPhone ukusetshenziswa noma isimo esibuyiswe. Kuba njalo izindaba ezimnandi kunoma ubani ongumnikazi i-iPhone X ihlela ukuyivula e idivayisi omusha kulo nyaka. Uma kungekho okunye, ngizobe ahambe ibanga elide ku defraying izindleko iPhone entsha.
isikhathi Thumela: Jul-30-2018